हाम्रो लक्ष्य जुनियर ग्रान्डस्लाम ः राणा « KhelkudNews.com
हाम्रो लक्ष्य जुनियर ग्रान्डस्लाम ः राणा
Published On :5January, 2015 3:21 pm
नेपाली टेनिस अहिले माथिल्लो उचाइमा छ । गत महिना कतारमा भएको एसियन जुनियर टेनिस च्याम्पियनसीपमा नेपाल तेस्रो भए पछि नेपाली टेनिसको साख चुलीएको मात्र छैन । टेनिस बृत्त अझ धेरै गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशाबादी बनेको छ । यसै प्रसंगमा नेपाल टेनिस संघका अध्यक्ष मनोज राणासंग गरेको कुराकानीको सार संक्षेप
एसियन जुनियर टेनिसमा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामी सन्तुष्ट छौ । टेनिस संघको प्रयास र आइटिएफले प्रदान गरेको जुनियर टेनिस इन्टेन्सीभ कार्यक्रमको कारण हामी त्यहासम्म पुगेका हौ । बिना शुल्क नेपाली खेलाडीलाई साताको नौ घन्टा प्रशिक्षणको अबसर प्राप्त भएको छ । यसको पूर्ण परिणाम त अझ १० बर्ष भित्रमा देखिन्छ । हामीले एसियन जुनियरमा काश्य पदक जित्दा सबै खेलाडीले राम्रो खेले । उनीहरु उत्कृष्छ छन् । केही बर्ष पछि उनीहरुले सिनीयर खेल पनि खेल्ने छन् । त्यसले नेपाली टेनिसलाई कायापलट गर्ने बिश्वास हामीले लिएका छौ ।
यी बाहेक अन्य युवा खेलाडीहरुको स्तर कस्तो छ नी ?
हामीसंग स्तरीय थुप्रै युवा खेलाडी छन्। पुरुष युवाव टोली मात्र होइन महिला युवा टोली पनि उत्तिकै राम्रो छ । सातदोबाटो र दशरथ रंगशालामा हुने नियमित प्रशिक्षणले उनीहरु निखारिदै छन् । हामी बिस्तारै एटीएफ र आइटिएफको प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउदै जाने छौ । नेपाल महिला युवा टोली भारतमा छ । उनीहरुमा यसले थप निखारता आउने नै छ । हाम्रो लक्ष्य निकट भबीश्यमा नै जुनियर फेड कप र जुनियर टेनिस कपमा सहभागिता जनाउने हो ।
यो परिणाम पछि सरकारबाट के अपेक्षा राख्नु हुन्छ ?
विगतमा नेपाल टेनिस खेलिनने देशको रुपमा लिइन्थ्यो । हामीले टेनिस खेलिने होइन,टेनिसमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने देशको रुपमा आफूलाई स्थापीत गरेका छौ । हामी माथिल्लो उचाइ पुग्न चाहन्छौ । मन्त्रालयर राखेप, ओलम्पिक कमिटी सबै निकायको सहयोग भए टेनिस समुदाय नेपाली खेलकुदलाई माथिल्लो उचाइमा पुर्याउन सक्षम छ भन्ने पुष्टि गरेका छौ । यी सबै निकाय प्रति विगतको सहयोग प्रति अभार ब्यक्त गर्दै भबीश्यमा थप सद्भाव र सहयोगको अपेक्षा राख्छौ ।
कर्पोरेट क्षेत्रलाई पनि केही भन्नु हुन्छ की ?
खेलकुदको विकास हुनका लागि पब्लीक क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र सरकार तीनै पक्षको सहयोग आबस्यक हुन्छ नै । कर्पोरेट क्षेत्रबाट हामीले विगत देखि राम्रो सहयोग पाउदै आएका छौ । हामीले गर्ने गरेको प्रतिोगितामा उहाहरुको उपस्थिती रहदै आएको छ । हामी उहाहरुलाइृ बिश्वास दिलाउन चाहन्छौ । हामी नेपाली टेनिसलाई माथिल्लो उचाइमा पुर्याउने छौ । तपाइहरुको लगानी खेर जाने दिने छैनौ । जुनियर ग्रान्डस्लामसम्मको हाम्रो लक्ष्यमा तपाइहरुको साथ आबस्यक छ ।